Iindidi zamasiko esinawo kwaXhosa – Township Times
Image: Sibulele Magini
By TTadmin On Sep 6, 2014
Ngu; Zodwa Gcingca-Ndolo
Image: IOL-Xolani Mavela
Iindidi zamasiko esinawo apha kwaXhosa zingangale ngca ilapha phandle kangangobuninzi bawo. Kodwa uya kuqaphela ukuba abanikazi bawo abanye babo abenzi nalinye kuwo.
Kaloku ingxaki esinayo thina maXhosa yile yokuba asinayo indawo elawula amasiko ethu, nabani na wenza loo nto ayithandayo, eyenza ngendlela athanda ngayo.
Yayisenzeka kumaxesha amandulo into yokuba amasiko alandelwe ngendlela eyiyo nakubeni kwakungekho bani ncakasana othi thina maXhosa masiwaqhube ngolu hlobo amasiko ethu, koko kumzi ngamnye inkonde yelo khaya yiyo eyayisithi inike umkhombandlela emakwenziwe ngawo amasiko ekhaya.
Kule mihla kubalulekile ukuba amasiko nezithethe zethu abhalwe kumathala eencwadi, kukhuthazwe ababhali bemidlalo yeqonga nababhali beencwadi zesiXhosa ukuba babhale ngamasiko nezithethe zamaXhosa, kukhuthazwe nemidlalo yeqonga engamasiko nezithethe zamaXhosa, zingalityalwa iindibano ngabo bangamaXhosa ukumana ukukhuthazana ngamasiko nezithethe zabo khona ukuze ulutsha lungalahlekani nenkcubeko yalo.
uNtloko, kwincwadi yakhe yemibongo, kumbongo othi; Uqhagamshelwano lwehlabathi, xa athetha ngendlela izinto ezazisaya kuqhubeka ngayo uthi: “mandulo yayilixesha lodliwanondlebe apho ubomi babuchunyiswe ngolonwabo, phantsi kolwazi olwalulungele ezo mini zokuthatyathwa lula kwentlalo yalo uluntu”. Uthetha ukuba mandulo phaya zonke izinto zazisenziwa zingabhalwanga phantsi koko iluthetha-thethwano indlela yokwenza nokulungisa imicimbi, amasiko nezithethe zezwe.
Yiyo ke le nto zonke izinto zazisenzeka kungekho bani uphikisayo. Kaloku yonke into yayithathwa lula nangentloniphano.
Kumasiko abalulekileyo kungabalwa la alandelayo;
Isiko lokuqala elithi lenziwe emntwini ngokwakwaXhosa lelembeleko. Kaloku imbeleko le yinto emelwe kukuqhawuka ngenxa yendlela le esukwe ngayo.
Xa ithe ayasukeka ukuze iqine ingabi nakuqhawuka ithi iqhawuke, imbeleko koko ujoliswe ekunyhashweni kwamalungelo abasetyhini. Ingaqawuka ke yazi ukuba kunyembelekile.
Imbeleko leyo ithi yenzelwe usana olu lubomvu lugqitywa ukuzalwa. Elo ke isiko belisithi libonakale xa umntwana engalenzelwanga kuba umntwana ubeba nezinto ezingaqhelekanga abezenza. Izinto ezifana nokushiywa lilindle okanye ngumchamo xa elele. Oku kuthi kubhencwe nanguMtuze kumbongo othi, Isikhalo seAfrika xa esithi, Salahla uQamata namasiko ethu, sayilahla imbeleko sagculel’iziyaca.
Akuba umntwana enzelwe imbeleko into elandelayo kukunxulwa kwakhe. Kuthi kufike abafazi bomzi lowo umdlezana lo endele kuwo, beze bephathele usana olo lugqitywa kuzalwa impahla. Ezi mpahla ke zithi zinikezelwe kumama wosana lowo kusithiwa kuye kuyavuyiswana naye nanjengoko ethe wakhululeka. Batsho besithi baze kumthatha ke ngoko ukuba abuyele kwasekhaya nosana olo lulindelwe ekhaya. Isiko elithi lilandele lelengqithi. Ingqithi ke ayililo isiko elenziwa kuyo yonke imizi, ithi yenziwe kwimizi ethile kwalapha kolu hlanga lwamaXhosa.
Image: Pinterest/Pindy Sandlana
Abantwana abangamantombazana babesaya kuba ziintyatyambo zamakhaya abo lingekafiki eli xesha sele kuphilwa kulo namhlanje, ixesha likamazenzele. Amantombazana ayegcinwa ngenkciyo ukugcina iinkomo zooyise babo.
Kaloku bekungavumelekanga nakancinane ukulala nomfana umntu engendanga, elo ibiba lihlazo elikhulu entombazaneni yakufunyaniswa ukuba yonakalisiwe ngumfana ngokuthi ayigqabhuze umhlumba.
Ukusetyenziswa kwenkciyo kuko okukhuselekileyo nokuthi kukhusele amantombazana ebafaneni. Amantombazana ke la ebesaya kuhlolwa kwixesha elingaphambili ukuqinisekisa ukuba basezintombi nto. Olo hlolo lusenziwa nanamhla oku, kodwa kwiindawo ezithile.
Isiko lokwaluka nelentonjane.
Uthi umntwana oyinkwenkwe akufikelela kwiminyaka elishumi elinesibhozo aqale ukwenzelwa isiko lokukhuliswa kwakhe. Elo siko ke sithi xa silibiza kukwaluka. Ukanti intombazana nayo ithi ikhuliswe kwangelayo isiko elithi lenzelwe amantombazana, siko elo esithi xa silibiza yintonjane okanye ngumngquzo ngokwaseMampondweni aseMpuma.
La ke amasiko angqamene naba bantu bangena ebudaleni inkwenkwe nentombazana, nangona uya kuva ngamanye amaxesha kusithiwa intombi yakwabani eyendele ekuthini yenzelwa isiko lentonjane kuba ingazange yenzelwe iseyintombi. Ngoku kuthi ngokungahambi kakuhle kwezinto uve kusithiwa ibuyile emzini ukuza kungeniswa. Eli ke lisiko elenzelwa umntwana oyintombazana akuba efumene ubudala.
Umntwana oyintombazana xa kuthiwe ufumene ubudala kuxa esiya enyangeni, bambi bathi uya exesheni. Lithi lenziwe ke eli siko kulandelwa indlela elithi lenziwe ngayo. Kukwanjalo ke nakwelo lokwaluka maninzi amanqanaba alo athi athathelwe ingqalelo.
Umntwana oyinkwenkwe uthi akhelwe ibhuma phaya endle apho aya kuthi asokelwe khona ngokuthi kususwe ijwabu phaya kwela lungu lobudoda. Intombazana iyathatyathwa igcinwe emkhusaneni ixesha elingangeveki okanye ezimbini ihlaliswe ngamanye amantombazana kunye naleyo ilikhankatha layo.
Image: Henry Dillon
Isiko lokwendiswa kwentombi nokuzeka komfana
Kukho ixesha apho umntwana oyintombazana athi afikelele kwinqanaba lokuba aye emzini, ukanti oyinkwenkwe afikelele kwixesha lokuba azeke okanye azekelwe ngokusesikweni kulandelwa imimiselo nemigqaliselo yozeko.
Mimiselo leyo efana nento yokuba kungekho mfana kwaXhosa othi engasebenzi asuke nje acinge ukuba uza kuthatha umntwana womntu ngelithi uyamzeka eyimpula kalujaca engenayo nenye inkomo yokulobola. Kaloku nalowo uthi azekelwe nguyise uthi adibanise kwinto anayo, akaqalwa phantsi. Aba bantwana bobabini, lo uyinkwenkwe nalo uyintombazana bathi badlule kula masiko sele siwabazile ngasentla phambi kokuba bangene kulo mcimbi wozeko nokwenda.
Intombazana ibisaya kuhlolelwa kowayo bakuba abazali bayo bethe banomfana wamathile abambonele yena. Ongahlolelwanga kuthi kuthunyelelwe oonozakuzaku ukuba baye kucela intombi leyo izekwayo. Ukanti xa kuthe akwalandelwa ezi nkqubo ithi intombi ithwalwe ngulowo uyizekayo ngokuthi ancediswe ngabo abacelelwe lo msebenzi.
Amasiko anxulumene nabazekayo nabo bazekwayo athi alandelwe kwesi sigaba. UBhongela uyiqaqambisa ngolu hlobo le nkcaza, uthi; “bekuye kufunwe iciko elulwimi lunqasha okwesabhokhwe mini intombi yasekhaya apha yenza isiganeko esiyincamisa mxhelo nesiyimbunguzulu kulo mzi, nesithi sibangele ukuba kuthethwe amazwi afanelekileyo”. Utsho ke xa echaza iziganeko ezifana neentonjana, umdudo, umtshato nezinye ke ezinxulumene nokukhula kwentombi.
Kaloku ibisaya kuba libhongo elikhulu into yokwenda kwentombazana mandulo, kuba kaloku ezamandulo iintombi bezisenda zingazange zadibana nakanye namadoda. Into ke leyo ebisenza ibhongo kwabo bendisa intombi yabo nakulowo uzekayo.
Xa ke umntu osele engenile emtshatweni makahlale, ongendanga angabi sisikhubekiso sokuchitha-chitha imitshato yabatshatileyo.
Elinye lamasiko abaluleke kakhulu kwaXhosa xa kusendiswa intombi lelo lokulobola. Umfazi uyalotyolwa kwaXhosa, akuphiswa ngaye. Ukulobola ke kuko okuthi kuqinise ubuhlobo phakathi kwale mizi yomibini. Lithi iciko elinguMndende kumbongo walo othi, Bafazi hloniphani, Bambi abazange bagxumeke nemikhonto. Bambi azange batyiswa namasi alo mzi. Bamb’abanayo nenkomo yobulunga. Bambi abazange balotyolwa. Bambi abakwazi nokuhlonipha. Babiza nje konke okuligama. Kodwa wofika umntu ezingomb’isifuba. Esithi ngumzi wam lo.
Kulo mhlathi wale mbongi sishwankathelelwe phantse lonke isiko elihambisana nokwenda. Kaloku umkhonto uyahlatywa, la nto sithi kukuhlolela, ukusuka komkhonto kuloo ntombi usiya kuhlatywa kokwabo mfana lowo uthandwe ngabazali bentombi. Umfazi uyatyiswa amasi akuba efikile ekhaya apha esaziswa kwiminyanya yalapha ekhaya.
Ilisiko into yokuba xa intombi isiya emzini wayo iye nale nkomo kuthiwa yeyobulunga, nkomo leyo ethi isakube izele incedise umkhwenyana ekondleni umfazi kunye nabantwana abo babo. Ulwendiso ke lulo oluthi luqale kwamhla kwacelwa intombi.
Ukuhlonipha komendi emzini
Izihlonipho ke zona zidlala enkulu indima le apha ebufazini, kuba kaloku kwa-isimilo eso sithi sibhenceke kwalapha ekuhlonipheni. Ukuhlonipha kwaXhosa yeyona nto ibonisa ukuba le ntombi izekiweyo isuka emzini onjani na, nanjengoko esitsho uMndende esithi abafazi mabahloniphe.
Emzini uhlonipha de uhloniphe nekati yaloo mzi, ukanti ukuba ngaba loo mzi uzalana neenyoka kuya kufuneka wenze njalo ukuzihlonipha nazo. Kula ncwadi kaJordan siyeva phaya kuyo ngokuhlonipha kwabafazi baseMampondomiseni. Uthi uJordan babesithi xa bebona inyoka umajola bathabathe iityali zabo bazithi wambu emagxeni, bathwale kakuhle, bayishenxele igqithe, bangawutsibi umkhondo wayo. Oko ke yayikukubonisa intlonipho kwiminyanya yasemaMpondomiseni kwakunye nakwiinkonde neenkondekazi zalo mzi.
Nosango says 4 years ago
Ndicela ukwazi ngomfana osweleke engekabi namfazi eshiye abantwana ukuba uyakwazi na ukukhatshwa aphinde abuyiswe ngenkomo
TTadmin says 4 years ago
Enkosi ngombuzo wakho.
Ewe, kuyakwazi ukwenzeka njalo, le misebenzi yeyekhaya, yenziwa likhaya (not umzi per se) lonto ke ithi kuthi kungenzeka.
Ayanda says 3 years ago
Ndicela ubuza xa ugqibo owenza isiyaca kunyanzelekile usinxibe oko, if kunyanzelekile ungasikhupha na xa ulala? Usinxiba ixesha elingakanani?
Xoli says 4 years ago
Xa indodana ifuna ukuzigodusa ngekwesiko la Mahegebe yenza njani?